FITAKIANA IREO NOSY MALAGASY : Hisy fakan-kevitra lehibe hataon’ny Fanjakana
Hiady ary hanao ny fomba rehetra hahazoan’i Madagasikara hitantanana indray an’ireo tangoro-nosy ato anatin’ny ranomasimbe Indianina ny fitondram-panjakana malagasy. 25 novembre 2019
Efa nisy ny dinika savaranonando niarahan’ny delegasionina malagasy, izay notarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian tamin’ny delegasionina Frantsay. Na mbola tsy nisy aza ny hevitra mivaingana azo noraisina dia efa dingana lehibe sy goavana mankany amin’ny fahazoana ireo Nosy malagasy no vita. Tsy ho adidin’ny fitondram-panjakana irery ihany anefa, na adidin’ny delegasionina mandray anjara amin’ilay dinika fa ny vahoaka Malagasy iray manontolo mihitsy no tokony hiara-hientana amin’ny fitakiana ny hahazoana an’ireo Nosy kely ireo.
Manoloana izany indrindra dia hisy ny fakan-kevitra lehibe karakarain’ny fitondram-panjakana foibe. Fakan-kevitra miompana indrindra amin’ireo Nosy malagasy izay giazan’ny Frantsay efa an-taonany maro. Ao anatin’io fakan-kevitra io no hiantsoana ny rehetra izay manana hevitra na manana fahalalana mikasika an’ireo Nosy miisa dimy mandrafitra ny “Iles Eparses”. Izany dia tafiditra ao anatin’ny dingana harahina mba hahazoan’i Madagasikara ny fitantanana an’ireo nosy kely ireo. Hiantsoana ihany koa ny fifanampiana sy ny fanehoan-kevitry ny tsirairay. Raha tsiahivina dia efa nisy ny fanambarana nataon’ny firenena mikambana izay nilaza fa an’ny Malagasy madiodio ireo nosy kely ireo, tamin’ny taona 1979.
Taorian’io, nangina tanteraka ny fitakiana ary tsy nisy sahy nijoro nitaky intsony ireo mpitondra nifandimby teo aloha. Ny Filoha Andry Rajoelina, efa taty amin’ny Repoblika fahaefatra no sahy nitaky izany raha nihaona mivantana tamin’ny Filoha Frantsay, ny volana mey lasa teo. Ho tohin’io nantsagana ny Kaomisionina iombonan’ny Malagasy sy Frantsay izay niara-nivory teny amin’ny lapan’Andafiavaratra ny herinandro lasa teo. Nijanona teo amin’ny fizirizirin’ny andaniny sy ankilany amin’ny fiandrianam-pirenena izay ananany ny dinika. Voalaza fa hitohy any Parisy amin’ny fotoana mbola tsy fantatra indray ity fifampidinihana ity.